HETSIKY NY MPANOHITRA : Miantso ny vahoaka tsy hanaiky horebireben’ny mpanakorontana ny FMIEM
Fihetsika mihoa-pampana no asehon’ny mpanohitra ankehitriny amin’ny fitarihany olona hitarika fanonganam-panjakana an-kolaka, hoy ny fikambanana manohana ny vina IEM na FMIEM. 18 février 2021
Araka ny voalazan’izy ireo, tsy azo ekena satria mety hamerina ny krizy politika eto Madagasikara indray ny tranga tahaka izany. « Niaraha-nisedra ny covid-19, tsy zakan’ny Malagasy ny zava-nitranga tamin’ireny kanefa mbola hovolena krizy vaovao indray ve ? », hoy ny fanontaniana napetraky ny FMIEM. Nitaona ny vahoaka tsy hanaiky hatao fitaovana politika koa ity fikambanana ity.
“Efa misy ny radio, efa misy ny haino aman-jery ary maro ny efitrano azo anaovana tatitra fa tsy voatery midina an-dalambe. Maninona no midongy ho eny Ambohijatovo ? Mazava fa fitarihana olona hirotsaka an-dalambe hanongana izao Fitondrana izao no tanjon’ireto mpanohitra ireto. Manameloka tanteraka izany fikasana ratsy izany izahay nisafidy ny Filoha” , hoy ny fanambaràn’ny FMIEM.
Hita maso, ary azo tsapain-tanana ny fampandrosoana napetraky ny Filoham-pirenena, eto amin’ny Firenena, hoy hatrany Rasoanaivo Andry Arilala, filoha nasionaly, mpitarika ity fikambanana ity.
Hatramin’ny nitondrany, nilamina ny fampandriam-pahalemana, fotodrafitrasa maro manerana ny Nosy nitsangana, (lalana, sekoly, tsena, trano, building, hopitaly...). Nanavao ireo lohamasinina tsy nisy niraharaha nandritra ny taona maro koa ny Filoha, nijery ny fahasahiranam-bahoaka ary namaha ny olana ara-tsosialy vokatry ny covid-19. Araka ny fomba fijerin’ny FMIEM, tsy maharesy lahatra velively ny fitaoman’ny mpanohitra olona hidina an-dalambe saingy tokony handray andraikitra hatrany ny mpitandro filaminana hitsinjovana ny tombontsoa ambonin’ny Firenena.
“Zon’ny mpanohitra ny mitsikera fa ny asa fanakorontanana kosa, lavinay marin-drano. Miantso ny vahoaka tsy hanaiky hatao sorona izahay ary manamafy fa izahay dia ao an-damosin’ny Filoham-pirenena hatrany manohana azy”, hoy hatrany ny filohan’ny FMIEM.